Dhaddacha: 'Beellama yeroo dheeraa waggaa lama boodatti nuuf haa qabamu' - Jawar Mohammadfaa
1 year ago 2147 Qoodi
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har'aa ooleen galmee himannaa abbaan Alangaa Obbo Jawaar Mohammad fi himatamtoota 23 irratti bane ilaalchisee dhaddacha ta'uusaa Abukaatoon isaani Obbo Tuulii Baayisaa OMN-tti himan.
Olmaan dhaddacha guyyaa har'aas ol iyyannoo Abbaan Alangaa mana murtii olaanaa Federaalaatti fudhatee tureef, murtee kenname irratti hundaa'ee adeemsa itti aanuu ajajuuf kan taa'ame ta'us, sababa ajajni mana murtii Olaanaa Federaalaa guyyaa kaleessa dabarse dhaddacha Lidataa hin qaqqabiniif jecha, manni murtichaa beellama itti aanu Caamsa 18, 2013tti akka qabate Obbo Tuuliin himaniiru.
Beellama kana ilaalchisee mormii isaanii kan dhageessisan himatamtoonni galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman sagalee tokkoon yeroon beellama nuuf haa dheeratu jechuu isaaniis Abukaatoon isaani OMN dubbise kun himaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa wayita ibsan, 'Nuti haqa dhabnus carraa mana murtiitti dhihaachuu argachaa jirra. Ilmaan Oromoo kumaatamni garuu mana hidhaatii baafamanii ajaja mana murtii malee ajjeefamaa jiru. Dargaggoon Oromoo addabaaba'ii irratti qaama hidhateen ajjeefamaa jira. Yakki guddaan kun uummata keenya irratti yoo raawwatu, olaantummaan seeraa akka hin jirree waan mullisuuf, barbaachisummaan mana murtiitti dhihaachuu natti hin mullatu' jechuun dhaddacha irratti dubbatanii akka turan Obbo Tuuliin ni himu.
Obbo Jawaar Mohammadis beellamni dheeraan waggaa lama boodatti nuuf haa qabamu jechuun "hidhamtoonni siyaasa Oromoo manni murtii biliisa isaan baase, balbala mana hidhaatii butamanii dhabamaa jiraachuu dhageenye. Nuti ammoo xaba fokkisaa akka kanaaf xabattoota ta'uu waan hin feeneef, manni murtii amma filannoon darbutti waggaa lamaaf beellama akka nuuf dheeressu gaafanna. Abukaatota keenyas, mana murtiis, Abbootii Alangaas rakkisuu hin barbaannu. Dhimmi keenya dhimma siyaasaati malee dhuguma yakka raawwanne miti" jechuun yaada wal fakkaataa mana murtichaatti akka ibsate Obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
Obbo Dajanee Xaafaa, "seera yakka shororkeessummaa ittiin himatamaniifi mootummaan jala da'atee ittiin namoota siyaasaa hidhaa jiru kun kan wayyaaneen siyaasa ofiif baafatte ture," jechuun erga qeeqni booda, "dhimmi keenya murtoo siyaasaa barbaada malee murtoo keessanii hin furamu. Kanaaf yeroon beellama akkuma jaallan koo jedhan nuuf haa dheeratu" jechuun mana murtichaa gaafatanii akka turan OMN odeeffateera.
Gareen abbaa Alangaa waa'ee beellamni dheerachuu ilaalchisee yaada mormii kan dhiheeffate yoo ta'u, manni murtichaas yaada gam lamaanuu erga dhaggeeffatee booda, amma danda'ametti murtiin saffisaa haqni akka kennamuuf hojjechaa jirra jechuun, gaafficha kufaa taasisee beellama itti aanu Caamsaa 18,2013tti bulfateera.
Mana Murtii Dhaddacha Jawar Mohammed Baqqalaa Garbaa
May 19, 2021, 1:43 p.m.
Dhimma dadhacha cufaafi ragaa golgaa duubaarratti Abbaan Alangee ragaa akka dhiyeeffatu ajaje
July 28, 2021, 10:29 a.m.
Dhaddacha: Jawaar Mohaammadfaa bakka hin jirretti himatni isaanii akka ilaalamu manni murtii ajaje